मैलै किन छोडें न्यूयोर्क ? - Enepalese.com
मैलै किन छोडें न्यूयोर्क ?
तिन साता हामीले कष्ट भोग्यौं । न्यूर्योकको क्वीन्स सिटी, जहाँ नेपाली र साउथ एशियनको बाहुल्य छ । कोराना भाइरसको संक्रमण असाध्यै बढी छ त्यहाँ । आजसम्म ३ जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् यही कोरोना संक्रमणकै कारण
बनिता शर्मा २०७६ चैत २३ गते २३:०९ मा प्रकाशित
म अहिले न्यूर्योक छैन । निकै कोलाहाल र त्रासदीबीच हिजैमात्र म भर्जिनिया आइपुगें ।
यहाँहरुले अनुमान लगाउनुभयो होला, म सपनाको शहर मानिने न्यूर्योक छाड्नुको कारण । त्यही सपनाकै कारण हामी न्यूर्योक थियौं ५ वर्षदेखि । कोरोना भाइरसले अहिले अमेरिका त्यसमा पनि न्यूर्योकलाई नराम्रोसँग थला पारेको छ । दैनिक एक करोड २० लाख भन्दा माथि मान्छे ओहोरदोहोर गर्ने विश्वको यो ब्यस्त शहर अहिले शून्यतामा झरेको छ । मान्छेहरु एपार्टमेन्ट, घरको झ्यालको सिसाबाट बाहिर चियाउँछन् । बाहिर एक तमासले दौडिरहेका एम्बुलेन्स, तिनका पट्यारलाग्दा आवाज मात्र एकोहोरो सुनिन्छ ।
तिन साता हामीले यस्तै भोग्यौं । न्यूर्योककोनी क्वीन्स सिटी, जहाँ नेपाली र साउथ एशियनको बाहुल्य छ । कोराना भाइरसको संक्रमण असाध्यै बढी छ त्यहाँ ।
आजसम्म ३ जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् यही कोरोना संक्रमणकै कारण । अरु संक्रमित उपचार गराउँदैछन् । क्वीन्स नजिकैको इल्महस्र्ट हस्पिटल सुविधासम्पन्न त छ, तर, कोरोनाको भरपर्दो उपचार हुँदैन । विरामी थुप्रिएका छन् । कतिको ज्यानै गइसक्यो ।
हामी त्यही हस्पिटलको क़रीब १५, २० मिनेट को दुरीमा म बस्थ्यौं । अधिकांश नेपालीहरुको बस्ती नै यही हस्पिटल वरिपरि छ ।
अहिले सम्म न्युयोर्कमा रोकथामको लागि प्रभावकारी केहि गरेको देखिएको छैन, न त लकडाउन गरेको छ । न पर्याप्त साबधानी अपनाएको देखिन्छ । मात्र स्टे होम, सेभ लाइफ मात्र भनिरहेको छ ।
दैनिक न्युयोर्क सिटीको मेयर ब्लाजियो र स्टेट गभर्नर एन्ड्रु कुमोले यति बिरामी थपियो, यतिको मृत्यु भयो मात्र भनिरहँदा मन चसक्क हुन्छ । संघिय सरकारले १००० शैय्याको क्रुज हस्पिटल पठाएको छ । न्युयोर्क राज्यले न्युयोर्क सिटी लगायत अन्य राज्यहरुमा अस्थायी हस्पिटल बनाईरहेका छन् ।
हस्पिटलमा भेन्टिलेटर अभावले ७२ घण्टा मा नै विरामीको मृत्यु भएको छ । डाक्टर नर्सहरुले फोहोर प्याक गर्ने प्लास्टिकले शरीर बेरेर विरामीको उपचार गर्दैछन । हस्पिटलले उपचार सामग्री थप्न सकेको छैन । हस्पिटल बाहिर आईस सहितको कन्टेनर ट्रक लाश राख्न तयारी अवस्थामा देखिन्छ । घर भित्र बसेर भगवान पुकार्नु बाहेक अरु त्यहाँ बिकल्प केहि छैन । कति नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरु अहिले न्यूर्योकमा हुनुहुन्छ । मिलेसम्म त अरु स्टेटतिर पनि सिफ्ट भएका छन् । तर, सबैको व्यवहारिक पाटो मिल्दैन । त्यसैले बाध्य भएर घर भित्रै सुरक्षा अपनाएर बसिरहेका छन् ।
न्युयोर्कमा प्रहरी अधिकारी र स्वास्थ्यकर्मीहरुमा समेत संक्रमण देखिएको छ। सरकारले अझैसम्म अनिवार्य लक डाउन भने गरेको छैन। प्रत्येक दिन दस हजारको दरमा बिरामी बढ्नु ठूलो खतराको संकेत हो भन्ने धेरैलाई थाहा छ । तर स्थिति नियन्त्रणमा हुने छाँट छैन ।
सुरुमा चाईनीज भाईरस भन्दै सार्वजनिक रुपमा खिसीट्युरी गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यो संक्रमणप्रति गम्भीर नभएको आरोप चारैतिर छ। दिनहूँ जसोका उनका पत्रकार सम्मेलनले कोरोना कहर घटाएको छैन। बरु हजारौँको संख्यामा बढिरहेको छ।
यस्तो महामामारीबाट जोगिन घरैमा सुरक्षित उपाय अपनाउने, घरभित्रै बस्ने त छँदैछ । साह्रै तनावका बीच हामी भने सिफ्ट हुन सफल भयौं । अहिले एक किसिमले मन प्रफुल्ल भएको छ ।
म नेपालमा हुने साथिहरुलाई पनि सरकारलाई गाली गर्नु को सट्टा सरकारले आव्हान गरेको कुरामा साथ दिन विनम्र अनुरोध गर्छु । सुरक्षित साथ घरभित्र बस्नुहोस र नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्न चालेको कदममा साथ दिनुहोस् भन्न चाहान्छु । नेपाल सरकारले पनि पर्याप्त जाँच केन्द्र बनाउने, आवश्यक उपकरण जुटाउने, सुरक्षित क्वारेण्टाइन बनाउने जस्ता काममा ढिलो गर्न हुँदैन ।
अन्तमा, जीवन रहेन जगत देख्न पाइन्छ भनिन्छ । तसर्थ सजग र साबधान रहौं हामी सबै ।
(हाल भर्जिनिया वस्ने वनिता शर्माको खुल्ला नेपाल डटकमवाट साभार गरिएको आलेख )